Peppermint waziwa kabanzi , sine kodwa kuyaqabula futhi kunikeza umzimba amandla. Isikhathi esining impela ke yengezwe itiye, nezinye iziphuzo, okufaka utshwala. Ungadliwa Mint akupheli. Sebenzisa le imbiza kanye salads, kanye nama-dessert, esenzela ubuciko. Kodwa, bambalwa abantu bazana khona okufana engavamile kakhulu ukusetshenziswa zalesi sitshalo. It kuvela ungakwazi ukupheka ngendlela emangalisayo esihlwabusayo ngempela ewusizo ujamu Mint. Sifunde ukuthi ilungiselela ikakhulu of izithelo izithelo, kodwa kukhona izinketho exotic ngaphezulu okukhona itiye kukhona.
Lime-lemon Mint ujamu
Ukuze ukulungiselela zimnandi Mint ujamu yezingxenye ezilandelayo zidingwa kakhulu:
amacembe Mint (phansi) - ingilazi;
Lemon - 1 isiqeshana;
Lime - 2 izicucu;
ushukela - 2 izinkomishi;
omunye sachet pectin.
Pheka sizobe multivarka. Ukuze uqale, ukulungiselela zonke izithako. Mint ukugeza, sula kubo ugaye (lokhu kungenziwa kusetshenziswa blender noma ngommese obukhali), lemon lime njengoba lami ukusika kakhulu fake. Ukuzumeka zonke izithako Multivarki isitsha, uthele phezu pectin. Pheka udinga "Isobho" Imodi imizuzu emihlanu, uze ukwaba juice ngokwanele. Sabe ukuhlunga ingxube kanye okuholela lemon-Mint-lime cocktail uthele ushukela.
Nalapha futhi, zihlanganisa mode efanayo futhi uqhubeke upheke: isiraphu efika ngamathumba, bese uqala ukushwaqa. Inqubo sifushane futhi kuthatha cishe imizuzu engu-15 Okubalulekile, ungakhohlwa ugovuze njalo spatula. Esikhathini hot ujamu Mint uthele okulungiselelwe imithetho imbiza esonta.
Jam ne uMelissa Mint
Kunenye iresiphi lapho hhayi kuphela esetshenziswa Mint, kodwa Melis (izitshalo elimnandi elimnandi). Thatha izingxenye alinganayo amahlamvu fresh nezinye izitshalo, bonke kufanele babe 600 amagremu. Le mali utshani uzodinga 1.5 kg ushukela kancane kuka ingilazi yamanzi (300 g). Ngaphezu kwalokho, acid kuyadingeka ukuze ungeze isipuni kalamula.
Ukupheka ujamu Mint kule iresiphi kuzohluka kanje:
ukupheka kufanele kube epanini phezu komlilo (kunokuba multivarka);
Amahlamvu akudingeki ukuba ugaye, ungafaki ulamula (ijusi kuphela);
lo isiraphu is elicwengekileyo futhi ukwenziwa futhi bevalela namahlamvu Mint.
Mint futhi Melis yami, sula kubo wafaka epanini. Gcwalisa kubo 1/2 yenombolo ecacisiwe ushukela, amboze ithawula likakotini isidlo. Kusukela ingxenye ushukela, amanzi nejusi fresh juice yesibili Bilisa isiraphu. Gcwalisa kubo amacembe Mint futhi melissa futhi ushiye amahora 5 kuya ingxube samanje. Emva kwalokho, wafaka kuso on ukushisa low bese ukuphela imizuzu 6-7 emva abilayo. Hhayi zingaphazamisi kanye lwaluyophola, uthele izimbiza Roll up. Jam kufanele abe ugodo umbala esobala oluhlaza. Nasi amalungiselelo awusizo, flavorful futhi enhle kakhulu ebusika! Lenza kahle itiye eliluhlaza. Ngaphezu kwalokho, le jam ingasetshenziswa njengendlela isiraphu for sifakwe emanzini amabhisikidi, engeza ibhotela ukhilimu, zizinisele khekhe okuphekiwe nokunye. D.
Phatha ke ngempela aphathe nabathandekayo babo, ngisho noma bayokwazisa engavamile Emerald ujamu Mint yakho. Ukubuyekeza, qiniseka idlule konke okulindelekile. Chitha ubusika ne ukunambitheka kanye ngaphandle imikhuhlane!
UHlelo Lwesiqondisi Kungena Esilula: lokuphatselene nesakhiwo nemsebenti weseli organelles
Quilting: imibono isikhuthazo nesiqondiso ezinganekwaneni ochwepheshe
Indlela ukupheka inhlama for the pie ku kefir?
Ifoni ephathekayo Sony Xperias Lt26I. Imininingwane kanye nokubuyekezwa